Kitra afrikanina: mpamono baolina be indrindra i Aubameyang | NewsMada
Kitra afrikanina: mpamono baolina be indrindra i Aubameyang
Ilay Gaboney, i Pierre-Emerick Aubameyang, milalao ao amin’ny Arsenal, D1 any Angletera, no voalaza fa mpilalao baolina kitra afrikanina nahafaty baolina be indrindra tao anatin’ny 10 taona lasa. Nahatratra 279 ny isan’ny baolina matiny, hatramin’izay. 31 taona izy, amin’izao fotoana izao. Na eo aza ny fahaizany mamono baolina, tsy mbola niatrika fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ny tovolahy, ary tsy mbola nahazo ny “Can” ihany koa.
Laharana faharoa ilay Kameroney, i Samuel Eto’O Fils, izay efa 39 taona ary tsy milalao intsony. Nahafaty baolina 224 izy nandritra ny niakarany kianja. Efa maro ny klioba nilalaovany, toy ny FC Barcelone sy ny Real Madrid. Indroa nandrombaka ny “Can” (2000; 2002). Nahazo ny medaly volamena, tamin’ny “Lalao olympika 2000” ary inefatra voahosotra ho mpilalao afrikanina mendrika (2003, 2004, 2005, 2010).
Fahatelo ilay Ganeanina, i Asamoah Gyan, nahafaty baolina 220. 35 taona ary milalao ao amin’ny klioban’ny North East United, any Inde. Efa voahosotra ho mpilalao afrikanina mendrika, ny taona 2010, saingy tsy mbola nahazo ny “Can” ihany koa i Asamoah Gyan.
Eo amin’ny laharana fahefatra ilay Egypitianina, i Mohamed Salah, ao amin’ny Liverpool, nahafaty baolina 202. Efa tompondakan’i Eoropa (Ligue des champions), ny taona 2019. Fahadimy ilay Ivoarianina, i Seydou Doumbia, milalao ao amin’ny ekipan’i Sion ao Soisa, efa nahazo ny “Can 2015”. Tsy tazana ao anatin’ity “Top 5” ity kosa ilay Senegaley, i Sadio Mané, sy ilay Alzerianina, i Riyad Mahrez.